China PES mafana miempo film adhesive ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy tontonana aluminium | H&H
Misy taratasy na tsia amin'ny
Hatevina / mm 0,1 / 0,12 / 0,15
Sakany / m / 1m ho ampanjifaina
Faritra mitsonika 70-112 ℃
Asa tanana asa milina fanindronana hafanana: 150 ℃ 8-12s 0.4Mpa
HD112 dia vokatra vita amin'ny polyester. Ity modely ity dia azo vita amin'ny taratasy na tsy misy taratasy. Matetika izy io dia matetika ampiasaina amin'ny fantsona aluminium na tontonana. Ataontsika mahazatra ny sakany amin'ny 1m, ny sakany hafa dia tokony hamboarina. Betsaka ny karazana fampiharana an'io famaritana io. HD112 dia ampiasaina amin'ny fametahana lamba sy lamba isan-karazany, PVC, ABS, PET ary plastika hafa, hoditra sy hoditra isan-karazany, meshes, foil aluminium ary takelaka aluminium ary veneer. Azontsika atao ny manamboatra an'io hatevin'ny 100micron, 120micron ary 150 micron io.
1. Herin'ny adhesive tsara: ho an'ny famatorana vy, tena tsara fitondran-tena izy io, manana tanjaka fametahana stong.
2. Tsy misy poizina sy milamina amin'ny tontolo iainana: tsy hamoaka fofona tsy mahafinaritra izy io ary tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny mpiasa.
3. Mora ny manodina amin'ny masinina sy ny fitehirizana ny vidin'ny asa: ny fanodinana milina fanosotra ho azy, mitahiry ny vidin'ny mpiasa.
4. Manana fahombiazana lehibe amin'ny alimina fitaovana: ity maodely ity dia mifanaraka amin'ny fampiharana ny fitambaran-javatra vita amin'ny aliminioma.
5. Miaraka amin'ny taratasy famoahana: Ny taratasy dia manana taratasy fototra, izay mahatonga ny fampiharana ho mora hita kokoa sy hikarakarana.
Mpanamboatra vata fampangatsiahana
HD112 Sarimihetsika mihetsiketsika mafana be dia be ampiasaina amin'ny lamination evaporator vata fampangatsiahana. Raha ny mahazatra, ny fitaovana vita amin'ny lamination dia tontonana aluminium sy fantsona aluminium indrindra ho an'ireo alimina misy firakotra amboniny. Ankoatr'izay, ny fanoloana ny fametahana lakaoly mahazatra, ny lamination sarimihetsika adhesive mafana dia nanjary asa-tanana lehibe namboarin'ireo mpanamboatra elektronika nandritra ny taona maro. Ity modely ity dia amidy mafana any atsimon'i Azia.
Ny sarimihetsika mametaka hafanana PES dia azo ampiasaina amin'ny lamination lamba hafa sy ny fifamatorana vy. Ohatra, ny fatorana ny hafanana amin'ny lobaka sy poketra tsy misy fangarony. Ho fanampin'izany, ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana ao anaty fiara, toy ny fatorana amin'ny fantson'ny fiara, valindrihana ary vokatra hafa. Ny sarimihetsika PES dia manana fampiharana marobe, na lamba vita amin'ny lamba na vy io, ny fampisehoana famatorana dia tena tsara.
Teo aloha: Horonantsary mametaka hafanana mametaka PO ho an'ny evaporator vata fampangatsiahana
Manaraka: Sarimihetsika fametahana hafanana PES
Sarimihetsika Adhesive misy lafiny roa
Horonan-tsarimihetsika mihetsiketsika mafana
Tpu Sarimihetsika Adhesive Elastic
Kasety famehezana PEVA ho an'ny fiarovana azo ampiasaina ...
Horonantsary mametaka hafanana miabo PO ho an'ny vata fampangatsiahana eva ...
Sarimihetsika fametahana fomba mafana mihetsiketsika PES